Dragon iin bineensa lubbu qabu kan yaddan ni jirra jedhame yadattamu, akkasumas gudda fi serpent jabba yokan reptile "magic" yokan "spirit" (afura) qabbu jedhame yaddatama. Bineensotti yaddan qoffa bekkamani kan ammalla fi fakki dragonii qaban bayyetti jirru.
Red Dragon akka symbolii walesitti fudhatamu dha
Gossa dragonotta yaddan ni jirru jedhamani kan bekkamani
Azhi Dahaka kan sexana matta sadii qabu akka dragon jirra jedhame yadda Zoroastrianii persiaatti argamanamaniin amanamu dha.
yadda Ugariticitt immo serpentiin matta torbaa qabu kan bishaan kessatti argamu kan Lotan jedhamu dha.
Akka yadda Hydra Greekitt matta bayye kan qabuu kan jabbena qabba jedhame yaddatamu jirra. Yoo tokko ijjefame, kan lamma bakka isatti ba'u dha. Akkasumas bishaan kessatti argama. Dragoniin kun Heraclesif dubrii isaanin ajjefamani dhumatan.
Smok wawelski kan jedhamu dragon polish kessatti argamu yoo ta'e "middle ages"itt garra Krakow marsani argamani dha.
Y Ddraig Goch symbolii wales yoo ta'u kan dimmatani argaman yoo ta'an kunis seena Mabinogion Lludd fi Llevelys irratti himamu.
Nidhogg, dragon Norse mythology kessati argamu yoo ta'u, bakka dukkana' laffa jallatti argamutti jiratta jedhame yaddatama. Kunis Ragnarok eeguf. yerro sunitti immo hikamme lafa kana cuffa hin ballessa jedhame yaddatama.
Orochi, serpent matta sadetti qabu kan Japanese mythology kessatti Susanootti ijjesse jedhame kan yaddatamu dha.
Retrieved from "https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Dragon&oldid=31820"
Last edited on 18 Sadaasa 2019, at 03:38
This page was last edited on 18 Sadaasa 2019, at 03:38.